Wasiirka Kalluumeysiga Soomaaliya oo sheegay in maraakiibta kalluumeysiga sharci darada ah ay soo celin karaan burcadbadeedii - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka Kalluumeysiga Soomaaliya oo sheegay in maraakiibta kalluumeysiga sharci darada ah ay soo celin karaan burcadbadeedii
Wasiirka Kalluumeysiga Soomaaliya oo sheegay in maraakiibta kalluumeysiga sharci darada ah ay soo celin karaan burcadbadeedii
March 14, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Cabdullaahi Bidhaan Warsame Cabdullaahi Bidhaan Warsame. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Kalluumeysiga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maraakiib ajnabi ah ku eedeeyay in ay kalluumeysi sharci daro ah ka wadaan xeebaha Soomaaliya.
Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo wareysi siiyay TV-ka dowladda ee SNTV ayaa sheegay in maraakiibtaas laga leeyahay dalalka Iran iyo Pakistan.
“Waan uga digeynaa maraakiibtaas inay si deg-deg ah waddanka uga baxaan wixii awooda ee aan saari karno iyo soo qab-qabashadoodana waan ka shaqeyneynaa. Waxaan u baahanahay in cid kasta oo naga caawin karta inay naga caawiso sidii loo qaban lahaa maraakiibtaas.” Ayuu ku yiri wareysiga.
Maraakiibta oo ka kooban 43 markab ayuu Bidhaan sheegay in badankood ay ku jiraan xeebaha maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug, isaga oo intaas raaciyay in ay sababi karaan in burcadbadeedii soo laabato markale.
Wasiirka ayaa ka codsaday xoogaga ajnabiga ah ee la dagaalanka burcadbadeeda ee ku sugan biyaha gobolka in ay gacan ka siiyaan sidii loo qab-qaban lahaa maraakiibtaas.
Wefdi ka socda Dowladda Federaalka Soomaaliya oo yimid Garoowe
Shirka wadatashiga Puntland oo ka furmay Garoowe
Puntland says its forces have not recaptured Qandala coastal town
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland government said its forces had not yet recaptured the Qandala coastal town of Bari region, an official said. Speaking to VOA Somali service, the commander of Puntland’s maritime forces, Admiral Abdirizak Diriye [...]
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo si culus ugu dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa gudaha Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay Muqdisho, sida ay sheegeen laamaha ammaanka. Qaraxa ayaa lagu xiray gaariga xildhibaan Maxamed Mursal Boorow xilli uu marayay gudaha Muqdisho fiidnimadii [...]
Turkiga oo sheegay in aysan wadamo kale kula tartamayn gudaha Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Turkigu tartan kulama jiro wadan walba oo kale ee xal doonista colaadaha Soomaaliya, sida uu sheegay danjiraha Turkiga u fadhiya Muqdisho. “Anagu marnaba loolan lama gelin daneeyaasha Soomaaliya… Turkigu wuxuu balaariyay jaceylka iyo [...]